Ny lantonoara Hacks Webinar - Lantonoara Of The Day
Ny lantonoara Hacks Webinar
Famoronana afa-po ho webinar Izany dia midika hoe sarotra foana.
Raha toa ianao ka miatrika ny zava-misy fa mety ho ianao mifampiraharaha amin'ny mpanatrika izay mety ho vondrona ny mpifaninana eo ireo ho lasa ho azo asa.
Indrindra fa efa tianao ny rehetra mba ho toy mahomby tahaka anao ihany.
A lantonoara hacks webinar dia tokony hanome anao teknika mba manana ny ambony tànany eo ambonin'ny fanatitra ny olona mitovy karazana asa izay miady mafy mba mivarotra amin'ny manokana.
Tadidio fa mampiasa ny fomba matihanina dia tsy mampihena ny zava-misy fa ianao mifampiraharaha amin'ny olona izay tsy contemplations ny handeha mihoatra ny mpifaninana mba ho mahomby eo amin'ny manokana.